सन्नि लियोनी नेपाल आउँदै बुधवार, भदौ ४, २०७६
काठमाडौंमा समलिंगीहरुको परेड शनिवार, श्रावण ३२, २०७६
अक्षयको ‘मिसन मंगल’ ले राख्यो रेकर्ड शनिवार, श्रावण ३२, २०७६
होटेल कल्पतरुमा अल्मोडा आउदैँ नेपालगन्ज न्यूरोडस्थित होटेल कल्पतरुमा शुक्रबार चर्चित गायक अल्मोडा राना उप्रेती आउदैछन् । न्यू नेपाल एड्भरटाईजिङ्ग सर्भिस नेपालगन्जको आयोजनामा हुन लागेको समर लाइभ कन्र्सटमा अल्मोडा आउन लागेको आयोजकले जनाएकोछ । बिहिवार, जेठ १६, २०७६
सेकेन्ड म्यारिजमा रमाउनेहरू ! टेलिभिजन कार्यक्रम प्रस्तोता रवी लामिछाने र चलचित्र विकास बोर्डकी निवर्तमान अध्यक्ष निकिता पौडेलबीच शुक्रबार बिहे भयो । यो दुवैका लागि दोस्रो बिहे थियो । अर्थात्, सेकेन्ड म्यारिज । सोमवार, जेठ ६, २०७६
सन्नी लियोनी कसरी बनिन् पोर्न स्टार ? एक बेकरीमा उनी वेटरका रुपमा काम गर्थिन् । पछि टेक्स एन्ड रिटायरमेन्ट फर्ममा नर्सका रुपमा काम गरिन् । त्यहाँ काम गर्दा सहकर्मी साथीहरुले उनलाई मोडलिङ गर्न सुझाउथे । एक साथीले त उनलाई फोटोसुटको अवसर पनि दिलाइन् । सोमवार, बैशाख ३०, २०७६
अनुष्का श्रेष्ठ बनिन् मिस नेपाल २०१९ मिस नेपाल २०१९ को उपाधि अनुष्का श्रेष्ठले जितेकी छन् । मिस नेपालको २५ औं संस्करणमा अन्य २४ प्रतिस्पर्धीलाई उछिन्दै अनुष्काले मिस नेपाल वर्ल्डको ताज पहिरिइन् । अनुष्कालाई मिस नेपाल २०१८ की विजेता शृङखला खतिवडाले ताज लगाइदिएकी थिइन् । श्रेष्ठले मस्ट इन्टिलेक्चुअल सहभागी र मिस फेसिनोको उपाधिसमेत जितिन् । शुक्रवार, बैशाख २७, २०७६
वर्षासँग पलको वाचा जेठको ३ गतेबाट रिलिज हुन लागेको चलचित्र ‘विर विक्रम २’को पहिलो गीत ‘पिरतीको मिठो तिर्सना’ले चलचित्र बजारमा राम्रै चर्चा पाइरहँदा यसको निर्माणपक्षले दोश्रो गीत सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ । सार्वजनिक हुन लागेको दोश्रो गीतमा नायक पल शाह र नायिका वर्षा सिवाकोटीलाई फिचरिङ गरिएको छ । मगलवार, चैत्र १९, २०७५
अष्ट्रेलियामा प्रदर्शन हुँदै ‘बुलबुल’ आगामी अप्रिल ७ र ८ तारिखमा नेपाली कथानक चलचित्र ‘बुलबुल’ अष्ट्रेलियामा प्रदर्शन हुदैछ । अष्ट्रेलियाको मेलवर्न सहरमा प्रदर्शन हुने भएको छ । मगलवार, चैत्र १२, २०७५